पूर्वरानी कोमल र नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्यको पछिल्लो अवस्थाबारे अस्पतालले दियो यस्तो जानकारी - Filmy News Portal Of Nepal
कोरोना पुष्टि भएर नर्भिक अस्पताल भर्ना भएका पूर्वरानी कोमल शाह र एमाले नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा राम्रो समाचार प्राप्त भएको छ । दुवै जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ । शाहलाई प्रति मिनट १० लिटर अक्सिजन दिएर उपचार गरिएको र उनको अवस्था सुधार नभएको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएपछि अस्पतालले त्यस्तो खबरको खण्डन गरेको छ ।
शाहको स्वास्थ्य अवस्थाबारे गरिएका त्यस्तो प्रचारको खण्डन गर्दै अस्पतालले अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताएको हो । हिजो अस्तिभन्दा धेरै इम्प्रुभ भएको छ । अक्सिजनको लेभल पनि बढेर गएको अस्पतालले जनाएको छ । पूर्व रानी अब खतरामुक्त भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पताल स्रोतले पूर्वरानी शाहको प्लाज्मा थेरापी विधिद्वारा उपचार गरिएको भन्ने भनाइको पनि खण्डन गरिएको छ । ‘प्लाज्मा थेरापी भन्ने कुरा सबै बकवास हो । मनगढन्ते कुरा हो’, स्रोतले भनेको छ ।
यता,कोरोना देखिएपछि हिजो नर्भिकमै भर्ना भएका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको अवस्था पनि सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ । खनाललाई पखाला चलेको भएपनि अरु कुनै स्वास्थय समस्या नभएको स्रोतले बताएको छ । ‘एकदम नर्मल हुनुहुन्छ । कुनै समस्या छैन’,अस्पताल स्रोतले भन्यो ।
२८ जना सांसदलाई कोरोना पुष्टि !
३ दिनदेखि ब’न्द कोठामा दाजुभाई भो’कभोकै हिड्नै नसक्ने अ’वस्थमा ? रु’दै भन्छन्- हामीलाई ब’चाउनुस, स’हयोग लिएर शिशिर भण्डारी पुगे (भिडियो)
प्रदेशकै ठूलो अस्पताल यौ’नध’न्दाको अड्डा ?